जनताको प्यारो डाक्टर ।
मनको अशान्ति अनुहारका कुनाकाप्चामा देखिने गरी मलिनता छाएको छ । बेखुसी ब्याप्त देखिन्छ । हिडाइमा सुस्तपन छ । अनुहार मात्रै देखाउन हो कि भन्ने गरी टाउको र दुबै कुमलाई पछ्याउराले सजाएर कुर्सिमा बस्छिन् एक अन्दाजी ३० बर्षिय महिला । पटुकाले पूरै पेट बेरेको छ । श्वास नै फेर्न गार्हो भए जस्तो गरी लामो सुस्केरा पनि सुनिन्छ । त्यही सुस्केरामा उनको सलामी पानीको (सलाइन ) आशा लुकेको छ ।
" डाक्टर बाबु । हाड्ज्वरो आम्च । गरम हुन्छ । केही गरी सितल गर्नुपर्‍यो " उनी आफ्नो ब्यथा पोख्छिन् । " पोहोर साल यहि बेला सलामी चडाएर सितल भाको । शरीरबाट पानी सकिएछ । सलामी चडाउनुपर्छ भन्थे डाक्टरले । " यस्तो कथा सुन्ने बानी परेको त पत्तै भएनछ मलाई । पहिले जस्तो प्रतिक्रिया नै आउन छाडिसकेछ । फेरी अर्को सलामिको गहिरो जरो बसेको बिरामी आयो भनेर जांगर नलाई नलाई फर्किएर उनको नाडी छाम्छु । आफ्ना शब्दहरु खर्चिन मन लाग्दैन मलाई । खै किन हो जांगर नै लोप भइसकेछ । पहिले यस्ता कथा सुन्दा सुन्दा र सल्लाहा दिँदा दिँदा जाङर भन्ने कुरा लोपोन्मुख थियो । अब पुरै लोप भएछ भनेर आश्चर्य लागेन मलाई । आफ्नै बसाइ पनि त्यती सहज नभएकोमा सलामिको सितलताको कथा सुनेर बेलाबखतमा सोचमग्न हुने गर्छु म ।
पूरानो काठको कुर्सी छ । अढेस लाउँदा ढाडमा बिजाउँछ । बस्दा बस्दा पुठा दुख्छन् । हात राख्दा कुर्सिको घेरबारमा ठोक्किन्छ । बिरामी बस्छन् टुलमा । यसो फर्केर जाँच्न लाग्दा शरीर नै बाँगो हुन्छ । अनी घर्याक्क् पारेर लतार्छु र मोड्छु कुर्सिलाई । के गर्नु ? घुम्ने कुर्सी त मेडिकल अधिक्रितको सुबिधामा पर्दो रहेनछ । किनकी कसैले ठट्टा गरेर हो कि साँचै हो बत्तीस दाँत ङिच देखाउँदै भनेका थिए " डाक्साप निदाउनुन्छ कि भनेर तपाईंलाई घुम्ने कुर्सी भन्दा काठको कुर्सी बेस हुन्छ भनेर त्यस्तो राखेको हो । " यस पटक भने मैले कुर्सी मोडिन । टाउकोमात्र घुमाएर कुरो सुनेजस्तो गरेँ । काठकै कुर्सिमा पनि हाइ आउन लाग्यो
। यो देखेको भए त त्यहि कुर्सी पनि हटाएर टुल राख्थे होला ति सज्जनले ! यो कुरा मनमा खेल्दै गर्दा सलामिको महिमा सुनाउँदै गरेकी महिलातिर ध्यान मोडिन्छ । कती कुरा त छुटी सकेछन् । " ........ हरेक बर्ष शरीरबाट पानी सकिन्छ । हाम्ची रेचार्ज गर्नुपर्छ । भित्री ज्वरो पनि सितल हुन्छ । सलामी चडाएपछि तागत लाग्छ । शरीर तंग्रिन्छ । जाङर बड्छ । ......." त्यो महिमा सुन्दै गर्दा कमी थियो त शेष नागको मात्र ।
" शरीरबाट पानी सकिन त पखाला ,बमन ,धपडी आदि हुनपर्‍यो । पानी कम पिएर हो । सलामि भन्दा पानी पिउनु नाम्रो हो । प्रेस्सर नाडीको गति सबै राम्रो छ । ..... । " भनेर एक बचन बोली फुट्नै आँटेको थियो । बिचमै रोकियो । बिगतका अनुभवहरु स्‍मृतिमा आउन लागे । त्यो भन्यो भने त बेखुस अनुहारमा कता कता बाँकी रहेको कान्ति पनि उडेर गएको धेरैपटक देखेको छु । नैराश्यता छाएको देखेको छु । असन्तुस्ट सेवाग्राहीको सँख्या बढ्दै गएर संस्थामा उपचार गर्न अाउनै छाडेको अनुभव गरेको छु । " कस्तो डाक्टर आएछन् । पहिलेकोले त चडाइदिन्थ्यो । कस्तो गतिला थिए तिनी । हाम्ची पैसा पनि खोज्दैनथे । ........ " आदि जस्ता सेवाग्राहिका प्रतिक्रिया स्मरणमा तुफानसरी आउँछ । आफ्नै इज्जत राख्न सकिने सलामीको आग्रहलाई नकारेर लामो समयदेखि आफु जनसमाजको आँखाको तारो भएको भान हुन थाल्यो । गाउँमा त सबैलाई सलामि चाडाइदिए चुनाव पनि जितिन्छ कि जस्तो लाग्यो ।
मेरा सहकर्मि साथी भर्खरै नियुक्ती भएर गाउँतिर धकेलिएर अाइपुगेका छन्। उनी र म सँगै बिरामी हेर्छौँ । अरु बेला धेरै शब्द बक्ने मैले ति महिलामा मितब्यायिता अप्नाएको देखेर उनी छक्क पर्छन् । उनलाई पनि बिरामीको यो सलामिको आग्रह चित्त नबुझेको प्रस्ट देखिन्छ । त्यस्तो किसिमको आग्रहलाई अनेक तरिकाले बुझाउने जमर्कोमा हुन्छन् । यस्तो मानसिकता केही परिवर्तन नै गर्छु भन्ने जोस छ उसमा । कुन दिन जोश सेलाएर म जस्तै प्रतिकृयाशून्य हुने हो भन्ने एकिन छैन । कुनै बेला यो निश्फल प्रयास नगर्ने सुझाब दिन मन लाग्छ । तर आँफैले निचोड निकालेको अझै राम्रो होला भनेर रोकतोक गर्दिन । नगरपालिकामा पोस्टिङ् परेछ भनेर खुशीले बत्तिदै आएको केही दिनमै दुर्गम नगरपालिका भोगेर निराश भएका थिए । जुनाकिरीजस्तो झिप्पझिप्प बत्ती ,खोलामा नित्य शावर , डाँडामा उक्लेपछि मात्रै तंग्रिने नेट्वोर्क भोगेर निराश मेरा साथी बिरामीको उपचारमा पनि निराश हुन्छन् कि भन्ने गहिरो पीर छ मलाई ।
धेरै समय सलामीको बिरामीमा नअल्मलिने निधो गरेर पर्चामा सलामी चडाउने आग्रहलाई उतारी सलामीको लागि मेरा अर्का कर्मचारी साथीलाई भनेँ । त्यति सुन्दा बित्तिकै उनको अनुहारमा निभ्नै लागेको कान्ति फेरी जागेर आयो । अनुहारमा खुशीका रेखाहरु दौडिन लागे । ओठले दबिएको मुस्कान फिजार्यो । । जाङर बढेर होला टुलमा अलि चनाखो भएर बसिन् । अनि जुरुक्क उठेर सलामी चडाउने एमेर्जन्सी कोठातिर लागिन् । सायद सलामीले गर्दा म उनको आँखाको नानी भएँ । आहा ! कहिलेकाँहि त सही सल्लाह नदिएर नै प्यारो भइने !
सलामी सकिएपछि उनी सिस्टाचार निभाउन अाइन् । बिदाबारी मागेर फेरि तीन महिनामा आउने बचन दिएर निस्किन् । कस्तो अचम्म ! यो सलामी पनि तीन महिने सुइजस्तो रहेछ उनको लागि । मेरो मौन स्विकृति पाएर उनी हर्षित थिइन् । एउटा अर्को ब्यक्तिको नजरमा म प्यारो साबित भएँ । मौन स्विकृति नदिएर पनि उपाय छैन । एक्लै बिचारको युद्ध जित्न सकिन्न । । सलामीको आग्रह मैले नमाने पनि च्याउजस्ता हुर्किएका मेडिकलमा गएर चडाइहाल्छन् । कमाइ खाने उपायमा ग्रामीण भेगमा सलामीको हौवाले राम्रो काम गरेको छ । मेडिकल चलाउनेहरु मुख खोलेर बसेका हुन्छन् कर्लप्पै खान्छु भनेर । उनीहरुको मुख खुलुन्जेल यो सलामीको गाथा चलिरहनेमा दुबिधा छैन । दुबिधा त केबल मैले जनभ्रमको निरन्तरतालाई टेवा दिएँ कि सेवाग्राहीको सेवा गरेँ भन्ने कुरामा छ । जे भए पनि म यसरी धेरैका दिलदिमागमा बस्दै गएको र बस्ने कुरामा भने बिस्वस्त छु ! ! शायद चुनाव जित्ने दाउ पनि यस्तै हुँदो हो भन्ने लाग्छ ।
Dr Laxmi Panthy April 20, 2020 at 5:43 AM
So funny Article. And Liked the style of writing.
Dr Laxmi Panthy April 20, 2020 at 5:45 AM
सलामी पानीको कथा चाहिँ लास्टै राम्रो रहेछ। रमाइलो लाग्यो। धन्यवाद डाक्टर साप्लाइ। - कति हास्नु है।haha